Chii chinonzi RSS? Chii Chikafu? Chii chinonzi Zvemukati Kubatana? | Martech Zone
Chii chinonzi RSS? Chii Chikafu? Chii chinonzi Zvemukati Kubatana?
Svondo, Kubvumbi 25, 2021 Chitatu, October 13, 2021 Douglas Karr
Nepo vanhu vachikwanisa kuona HTML, kuitira kuti mapuratifomu esoftware adye zvemukati, inofanirwa kunge iri mune yakarongeka, inoverengwa fomati yemapurogiramu mitauro. Iyo fomati ndiyo yakajairwa online inonzi chikafu. Paunoburitsa ako ekupedzisira zvinyorwa mumablog software senge WordPress, mumwe chikafu inoburitswa otomatiki zvakare. Kero yako yekudya inowanzo kuwanikwa nekungopinda URL yesaiti inoteverwa ne / feed /
Chii chinonzi RSS? RSS inomirirei?
RSS iri webhu-yakavakirwa gwaro (inowanzoidzwa inonzi chikafu or webhu feed) iyo inoburitswa kubva kune sosi - inonzi iyo mugero. Chikafu chinosanganisira yakazara kana yakapfupikiswa zvinyorwa, uye metadata, sekuburitsa zuva uye zita remunyori. RSS inobvisa zvese zvinoonekwa dhizaini yako saiti uye inongoburitsa zvinyorwa zvemukati nezvimwe zvinhu zvakaita semifananidzo nevhidhiyo.
Vanhu vazhinji vanotenda izwi rekuti RSS pakutanga raimiririra Kubatana kuri nyore asi zvaive Yakapfuma Saiti Pfupiso… Uye pakutanga RDF Saiti Pfupiso.
Mazuva ano zvinowanzo kunzi Kubatisisa kuri nyore (RSS) uye chiratidzo chepasirese che RSS feed chinotaridzika seizvi kurudyi. Kana iwe ukaona iyo chiratidzo pawebhusaiti, zviri kungo gonesa iwe kuti utore iyo URL kuti upinde mune yako feed muverengi kana iwe ukashandisa imwe.
Vafudzi veFeed vaimbove vakakurumbira kusvika pasocial media mapuratifomu akauya. Zvino, vanhu vazhinji vachatevera yemagariro media chiteshi online pane kushandisa uye kunyorera kune feed. Izvo hazvireve kuti tekinoroji haigone kuverengerwa, zvakadaro.
RSS Chidimbu Chiratidzo
Iyi ndiyo tsaru asi yakakura vhidhiyo tsananguro kubva kuCustom Craft inotsanangura mashandisiro anoita mafidha uye kuti vashandisi vangashandisa sei Chaizvo Rakareruka Syndication (RSS):
Chii chinonzi Content Syndication?
RSS feeds inogona kushandiswa ne fudza vaverengi uye pasocial media kutsikisa mapuratifomu. Vaverengi vezvipiwa vanogonesa vashandisi kunyorera kune iwo makwara avanoshuvira kuverenga nguva zhinji uye nekuaverenga kubva kunyorera. Muverengi wekudya anovazivisa kana paine zvinhu zvakagadziridzwa uye mushandisi anogona kuzviverenga asina kumboshanyira saiti!
Iyi nzira yekungopa wega zvemukati kune vanyori uye mapuratifomu inozivikanwa se zvemukati syndication.
Masocial media mapuratifomu anowanzo gonesa vaparidzi kuti vangozvitumira zvavo zvemukati kune avo masocial chiteshi. Semuenzaniso, ini ndinoshandisa Feedpress kubatanidza zvemukati zvangu kune angu ega uye ehunyanzvi enhau enhau maakaundi kuLinkedIn, Facebook, uye Twitter. Kushandisa chikuva senge FeedPress zvakare inokutendera iwe kuongorora yako yekukura kukura.
PS: Usakanganwa ku Nyorera kune yedu RSS Kudya!
Tags: zvemukati syndicationrdf saiti pfupisoyakapfuma saiti pfupisoRSSrss feedevanhu vezvenhausocial media feedchii chinonzi rsschii chinonzi gwarachii chikafuchii chinonzi feed chiteshichii chinonzi rdf saiti pfupisochii chiri kupfuma saiti saitichii chinonzi web feedchii chinonzi rss chiteshichii chiri nyore kubatanachii chinonzi rss
Hongu, Doug. Chinhu chandakanyatsonzwisisa !! Ndakagutsikana nehafu.
Woohoo! Wave nemoyo murefu, Christine. Ndinowanzo wedzera hunyanzvi nezvandinotumira. Ndakafunga kuti yakanga yave nguva yekudzora uye kubatsira vamwe vanhu kubata.
Kana iwe uri geek wakanyura mune izvi zvinhu, zvakaoma kurangarira kuti havasi vese vanoziva zvauri kutaura nezvazvo!
Imwe yekupedzisira paRSS. Fungidzira kubvisa peji rino kumashoko nemifananidzo zviri muchinyorwa… nezvimwe zvese zvakawandisa zvabviswa. Ndozvinoita positi iyi muRSS feed!
Chimwe chezvinhu zvenguva refu-yekuita-rondedzero yaive yekukumbira Douglas kuti anyore tsananguro diki yekuti chii chaizvo RSS. is.
Ndatenda nekuramwa kusati kwaitwa, Doug. (uye kurudziro yechikamu chitsva mublog rangu, futi 😉 )
Iye zvino wave kushamisika kuti ndeipi musoro wekombuta wauchazoyeuchidzwa nezve nguva inotevera yaunozviwana iwe zvakare uchiverenga muBhuku raGenesi lol.